စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁)
စုံထောက်အောင်တိုက် နှင့် ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်း (၁)
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Mar 30, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 37 comments
တစ်နေ့ ကျွနု်ုပ်သူရဇော်သည် အလုပ်အကုိုင်များအဆင်မပြေခြင်း၊ ဇနီးမယားမှာ လင်ငယ်နေခြင်း၊ ဓနဥစ္စာများအပိုင်စည်းခံရခြင်းစသော ဘေးဒုက္ခအရပ်ရပ်ကို ခါးစည်း၊ ရင်စည်းခံပြီးနောက်
အလုပ်အကိုင်မယ်မယ်ရရမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့် ကြုံရာကျဘန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ရင်း နာမည်ကျော်စုံထောက်ကြီးအောင်တိုက်နှင့် အလုံဆိပ်ကမ်းတစ်နေရာတွင် စုံစည်းမိကြသည်….
အောင်တိုက် ။ ။ ကိုသူရ၊ ခင်ဗျား စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုပြီး စာတွေလဲဆက်မရေး၊ အရက်ကိုအဖော်ပြုလို့ ဒီလိုကုန်စိမ်းထမ်းလိုက် အရက်သောက်လိုက်လုပ်နေလို့ ခင်ဗျားဖြစ်မလား
သူရဇော် ။ ။ ကိုအောင်တိုက်ရယ်…ခင်ဗျားနဲ့ ဂျာနယ်တိုက်မှာ နှစ်ခါသုံးခါပဲ ဆုံဖူးပေမယ့် ကျုပ်အဖို့တော့ ငယ်ပေါင်းလိုကို ခင်မင်မိပါတယ်…
ဒါပေမယ့်ဗျာ ကံကြမ္မာက ကျွန်တော့်ကို လှိုင်းတံပိုးတင်မကဘူး၊ မုန်တိုင်းပါတိုက်ချလိုက်တာဆိုတော့….
အောင်တိုက် ။ ။ ဒီမှာ ကိုသူရ ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက တစ်ခုခုဆို ကံကြမ္မာဆိုတဲ့ မမြင်ရတဲ့ဟာကြီးကိုပဲဆွဲထည့်နေကြတော့တာပဲ…
တကယ်တော့ ကံကြမ္မာဆိုတာ အလုပ်ပဲဗျ…ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့ အကျိုးကိုပဲခံစားရတာ…အခုချက်ချင်းခံစားရတာနဲ့
ကဲဗျာ…မှုခင်းဂျာနယ်တွေမှာ စာရေးကောင်းတဲ့ခင်ဗျားကို ကျွန်တော့အလုပ်အတွက် မှတ်တမ်းရေးဖို့နဲ့ တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်
အလုပ်ပေးမယ်… ကုန်လဲမထမ်းနဲ့တော့…အရက်ကိုလဲကြိုးစားပြီး ဖြတ်နိုင်အောင်ဖြတ်ဗျာ…ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်မှာ
သူရဇော် ။ ။ ကျေးဇူးကြီးပါပေဗျာ…ကိုအောင်တိုက်ရယ်…
ကိုအောင်တိုက်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ စုံထောက်လောကမှာ နာမည်ကြီးအလွတ်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကြံခိုင်သန်မာသော ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်မှုနဲ့ ယောင်္ကျားပီသသော အရပ်အမောင်း၊ မြင်မြင်ခြင်းလူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းခံရလောက်သော ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးများနှင့်ပြည့်စုံပြီး၊ အမှုတိုင်းကို ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းထက်
မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် မှန်သည်ထင်လျှင် တရားခံပင်ဖြစ်လင့်ကစား၊ အကာအကွယ်ပေးတတ်သောကြောင့် လူအများယုံကြည်ကိုးစားကြသော အလွတ်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ထုိုသို့ နာမည်ကြီးခြင်း၊ အမှုအခင်းစုံစမ်းရာတွင် တိကျမှန်ကန်ခြင်း၊ စေ့စပ်ခြင်းဟူသော အရည်အချင်းများကြောင့် ရန်ကုန် စီအိုင်ဒီမှ လွန်စွာမနာလိုခြင်းခံရသော စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ မကြာခံ ချောက်ချခြင်းခံရသော်လည်း၊ မခိုင်လုံသောကြောင့် လွတ်နေသည်ချည်းသာဖြစ်၏…
တစ်မနက် ကိုအောင်တိုက်နှင့်ကျွန်တော် သုံးပန်လှ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင်…ချိုပေါ့တစ်ခွက်စီနှင့် ငါးအသားလုံးကြော်လွေးနေခိုက်…
အသက်(၅၀)ခန့်ရှိသော အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးသည် ဆိုင်အတွင်းသို့ ခပ်သုပ်သုပ်ခြေလှမ်းဖြင့်ဝင်လာပြီး….
အမျိုးသမီးကြီး ။ ။ ဆရာကိုအောင်တိုက် မဟုတ်လား….
အောင်တိုက် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်…ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ….
အမျိုးသမီးကြီး ။ ။ ဆရာ့ကို ကျွန်မရဲ့သခင်မလေးက တွေ့ချင်ရှာလွန်းလို့ ဆရာ့ကို ဖိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်….ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်
အမျိုးသမီးကြီး ။ ။ သခင်မလေးက ဆရာနဲ့ နှစ်ယောက်ခြင်းဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်…ဆရာ့ရဲ့ အကျိုးတော်ဆောင်ခအနေနဲ့လဲ
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှမလျော့စေရပါဘူးလို့မှာလိုက်ပါတယ်…. အချိန်သိပ်မရလို့ ကျွန်မကိုတော့ ခွင့်ပြုပါဦးဆရာ….
ခပ်သုတ်သုတ်ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်ခွာသွားပြီး ဆိုင်ရှေ့လမ်းတွင်ဖြတ်သွားသော Taxi တစ်စီးကို ဈေးပင်မဆစ်နိုင်ပဲ
တက်ကာထွက်ခွာသွားပါသည်… အမျိုးသမီးကြီးထွက်ခွာသွားတော့မှ ပေးခဲ့တဲ့ လိပ်စာကဒ်လေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရာ….
အမှတ် (၁၄၅)၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊
အောင်တိုက် ။ ။ ဘယ်လိုလဲ ကိုသူရ၊ မင်းသမီးဆူးခက်ကိုယ်တိုင် ဖိတ်ကြားရတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားစိတ်လှုပ်ရှားသွားလား….
ကျုပ်သိသလောက်တော့ မင်းသမီးဆူးခက်က ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနဲ့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ုိုင်းကိုပါ ၀င်ဆန့်တဲ့မင်းသမီး
သူကုိုယ်တိုင်က ကျုပ်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ မထူးခြားပဲကို မနေဘူး…
ကိုအောင်တိုက်၏ ချယ်ရီကျူကျူကားလေးအားမောင်းပြီး ဆူးဝင်နီခြံကြီးရှိရာသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့တော့သည်…..
ဆူးဝန်နီခြံသို့အရောက်…ဒရ၀မ်မှာ ခြံတံခါးကို အသင့်ဖွင့်ပေးပြီး၊ ခဏနေက တွေ့ခဲ့သောအမျိုးသမီးကြီးမှ ဧည့်ခန်းအတွင်းထိုင်စေပြီး စကားစပြောပါတယ်…
အမျိုးသမီးကြီး ။ ။ ဆရာ သခင်မလေးက စာဖတ်ခန်းထဲမှာ စောင့်နေပါတယ်…ဆရာတစ်ဦးထည်းတွေ့မယ်လို့ မှာကြားထားပါတယ်…
အောင်တိုက် ။ ။ ခင်ဗျားတို့ သခင်မလေးကို ပြောလိုက်ပါ…သူရက ကျွန်တော့အသက်နဲ့လဲပြီးယုံကြည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်မို့ သူ့ကိုမယုံကြည်ခြင်းဟာ
ကျွန်တော့ကိုမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်…တကယ်လို့ ဒီကိစ္စကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်…ကျွန်တော်အခုထပြန်ပါ့မယ်…
ကိုအောင်တိုက်စကားအဆုံး အမျိုးသမီးကြီးမှ စာဖတ်ခန်းဟုထင်ရသော အခန်းသို့ ၀င်သွားပြီး သူမ၏သခင်မထံ အကြောင်းကြားဟန်တူပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲတွင် အစေခံ၊ မာလီ နှင့်နေနိုင်သော မင်းသမီးဆူးခက်၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာ အတိုင်းမသိများပြားကြောင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်…။
ခဏအကြာတွင် အမျိုးသမီးကြီးမှာ အခန်းအတွင်းမှ ပြန်ထွက်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ (၂)ဦးအား အခန်းအတွင်းသို့ ၀င်စေပါသည်…
အခန်းထဲတွင် Cold Water ရေမွှေးရနံ့လေးများကို ရရှိနေပြီး စားပွဲပေါ်တွင် စာရွက်လေးတစ်ရွက်၊ ဓားမြှောင်သေးသေးလေးတစ်ချောင်းနှင့်
စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဆုံလည်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော မင်းသမီးဆူးခက်အား တွေ့ရှိရပေသည်…
ဆူးခက် ။ ။ ဆရာအောင်တိုက် ကျွန်မ ဆရာ့ကို အားကိုးတကြီးနဲ့ ပင့်လိုက်တယ်…အခုလိုလာပေးတဲ့အတွက်လဲ အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်…
ဆရာနဲ့အတူလာတဲ့ ကိုသူရကိုလဲ ကျွန်မပြဿနာအတွက် နှုတ်လုံစိတ်ချရမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်…
အခု ကျွန်မကြုံနေရတဲ့အချက်က ဒီစာကြောင့်ပါပဲ
ကိုအောင်တိုက်က စာကိုယူဖတ်ပြီးနောက် တစ်စုံတရာကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဟန်ပြုပြီး…စာရွက်ကို ကျွန်တော့လက်သို့လွှဲပေးလိုက်ပါသည်…
ဆူးခက် ။ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂)ရက်လောက်က လူတစ်ယောက်လာပြီး ကျွန်မဆီအဲဒီစာနဲ့ ဒီဓားမြှောင်သေးသေးလေးကို ပို့ခိုင်းပါတယ်…
လာပို့တဲ့ လူကတော့ ပိုက်ဆံရလို့လာပို့တဲ့ အမှိုက်ကောက်သမားပါ…
လာပို့တဲ့လူပြောချက်အရတော့ အရပ်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်နှာခေါင်းချွန်ချွန် မျက်မှန်တဲ့လူလို့သိရလို့ချက်ချင်းကားနဲ့ထွက်လိုက်တော့
သူက သေနတ်ထုတ်ပြပြီးပြောသွာတာက…ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းကို အံမတုနဲ့ ပေးစရာရှိတာ လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ပေးလိုက်….
ကျွန်မကလဲအငြိမ့်မင်းသမီးဆိုတော့ ဒီသတင်းတွေအပြင်မထွက်ချင်တာတစ်ကြောင်း၊ ရဲကိုလဲ မယုံကြည်ရဲတာကြောင့်
အောင်တိုက် ။ ။ အဲဒါကတော့ တော်တော်ထူးဆန်းနေပြီ…
အစကတည်းက မသိစေချင်လို့ တခြားလူနဲ့ ပို့ခိုင်းရင် သူကစောင့်နေစရာမလိုဘူးလေ…
အခုကျတော့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံက တော်တော်ပိရိပြီး သွေးအေးမယ့်ပုံပဲ….ဒါနဲ့ အဲဒီ အမတ်မင်းဆိုတဲ့လူကိုရော အခုတွေ့ရင်မှတ်မိပါ့မလား
ဆူးခက် ။ ။ မှတ်မိပါတယ်ဆရာ…ဒါပေမယ့် သူတို့ ပြောတဲ့ပတ္တမြားဆိုတာလဲ ကျွန်မမသိသလို၊ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းနဲ့လဲ
အောင်တိုက် ။ ။ ဒါကတော့ မဆူး ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားပြီး အဖြေရှာကြရမှာပေါ့…မဆူးအနေနဲ့လဲ သတိရရင်ရသလို အကြောင်းအရာလေးတွေကို
မကွယ်မ၀ှက်ပဲပြောပေါ့… ကိစ္စအကြောင်းကြီးငယ်ရှိရင် ကျွန်တော့ဖုန်းကို ဆက်ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်…အခုတော့ ကျွန်တော့်ကိုခွင့်ပြုပါဦး
ဒီဓားမြှောင်လေးနဲ့ စာကိုတော့ ယူသွားခွင့်ပြုပါ….တစ်ရက် (၂)ရက်အတွင်း…အကြောင်းတစ်ခုခုပြန်ပါ့မယ်….
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဆူးဝင်နီခြံကြီးမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးနောက်…
အောင်တိုက် ။ ။ ကိုသူရ…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ဖက်မောင်းဗျာ…စာကြည့်တိုက်ထဲဝင်ရအောင်….
သူရ ။ ။ ကိုအောင်တိုက်ကတော့ နောက်ပြီ…စာကြည့်တိုက်ပိတ်ထားတယ်လေဗျာ…
အောင်တိုက် ။ ။ မပူပါနဲ့ ကိုသူရရယ်…ကျွန်တော့မှာ ငွေဆိုတဲ့ သော့လေးရှိပါတယ်…
ကိုဖက် ရီအောင်မစနဲ့ဗျာ …. ဂျပုကောင်ကိုများ ကြံခိုင်သန်မာသော ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်မှုနဲ့ ယောင်္ကျားပီသသော အရပ်အမောင်း၊ မြင်မြင်ခြင်းလူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း ”မ” ခံရလောက်သော လို့ရေးပါကိုဖက်ရယ် …. တူရကအပေအတေ အလေအလွင့် ခစ်ခစ် …တော်ပြီ ရီချင်လို့ ဆက်မရေးနိုင်တော့ဘူး … တူရလင်ကြည့်နေတယ် ….
အမလေး အပုကောင်က ချောလွန်းလို. သူပဲ သဲသဲ လှုပ်နေပြီးတော့… ဟွန်.
သဲသဲ လှုပ်နေတာက နာနင့်နဲ့တွေ့တုန်းက ပုရွက်ဆိပ်ကိုက်လို့ပါအေ …. ညည်းကိုလှုပ်စရာလား .. ချဉ်ပအေ … ဟင့်…
ဇာတ်လမ်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ကိုဖက်ရေ …
ဒါပင်မယ့် အလွတ်စုံထောက်ကတော့ ….
” ကိုအောင်တိုက်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ စုံထောက်လောကမှာ နာမည်ကြီးအလွတ်စုံထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ကြံခိုင်သန်မာသော ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်မှုနဲ့ ယောင်္ကျားပီသသော အရပ်အမောင်း၊ မြင်မြင်ခြင်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းခံရလောက်သော ” သိပ်မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်
အေးပေါ့လေ သများတို.က ပေါင်သလုံးကိုကိုလောက် ဘယ်ခန်.မလဲအေ…….. ခိခိခိ
ချိုမိုင်မိုင် က ခဲ့တာ ဘယ်လို သိလည်း မသိဘူး ဇတ်လမ်းတွဲ အရှည်ကြီးထဲ ပါနေပါကောလား.. သေပြီ ဆရာ ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်။
မဆူးရယ် ပေးစရာရှိတဲ့ ပတ္တမြားကို ပေးလိုက်ပါ။ အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ မနော စိတ်ပူလို့ပါနော်….
ဆူး လည်း စဉ်းစားနေတာ.. ဘယ်တုံးက ရထားတဲ့ ပတ္တမြားလဲ မသိဘူး.. သူကတော့ အတင်းကာရော တောင်းနေပြီ။
ဟိုနေ့က ၀ယ်လာတဲ့အင်္ကျီမှာ ကပ်ထားတဲ့ကျောက်တွေထဲမှာပါတဲ့ ပတ္တမြား ဖြစ်မှာပေါ့။ တလုံးတလေပဲ ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ မဆူးရယ်။ မပေးမခြင်းတော့ ဒီဇာတ်လမ်းက ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုရီးယားကားတွေလို နှစ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ မတော်ကျန်တဲ့လူတွေပါ အမှု့တွဲထဲပါတော့မယ်။ အင်းဖက်ဖက်ကက် ဖက်ဖက်ကက် အခုလောငြိမ်နေတယ်မှတ်တာ ဒင်းက ကြံနေတာကိုး။ ဇာတ်လမ်းပြောပါတယ်။
ဆူးရေ ဟံသာဝတီအ၀ိုင်းက ပတ္တမြားကြီးများလားမသိဘူးနော် မြန်မြန်ပေးလိုက်လေ။ကြောင်ဝတုတ်ဂိုဏ်းက သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဟံသာဝတီ အ၀ိုင်းက ပတ္တမြား မဟုတ်ဘူး အမဲသားတုံးကြီး။
တွေးရင်းနဲ့တောင် တော်တော် ကြောက်လာပြီ.. ဟီးးးးး
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း ရွှေတိုက်စိုးရဲ့ နာမည်အရင်း ကိုအောင်တိုက်ဆိုတာကို ကြားကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စုံထောက်ဝတ္တုလောကမှာ ခြေလှမ်းချဖို့ သင့်တော်တဲ့ နာမည်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စုံထောက်ကျော်ကြီးကို ဇာတ်လမ်းထဲကအတိုင်းခံစားပေးပါ…အပြင်က အမြင်နဲ့မခံစားကြပါနဲ့…
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲက နာမည်ကျော်များလဲ သူ့နေရာနှင့်သူ ပါဝင်ကပြကြရမှာဖြစ်လို့…
ဘုန်းကြီး ခေါင်းခေါက်ပြီးမှ လာတောင်းပန်နေတယ်… လူဆိုးသခိုးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်..
ကြောင်ကုန်ကူးမှု ရပ်………………. ကိုကြောင်ဖက်ကို ဖြတ် ……. ခိခိခိ
ဆရာကြီးမင်သိင်္ခ ပြန်ဝင်စားပြီး ရေးထားသလားအောက်မေ့ရတယ် …
ဆက်ရေးဗျို့ ဒုတိယမင်းသိင်္ခဆိုရင် မဆိုးဘူး လာလည်ရင်ထမင်းကိုဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့ကျွေးမှာလား
အွန်………..မရှိသေးတဲ့ ဇနီးပါ လင်ငယ်နေတယ်…………. အမငီး အဖြစ်ရယ် တယ်ဆိုးပါလားဟယ်….. ကြောင်ဝတုတ်တုတ် ခင်ညားကြီး ၀ဋ်လည်မယ်မှတ် ဟွန်း……… လူဆိုးမကြီး……. ဟို ၁၂ လက်မ တစ်ပေ သုံးပေ ရွှေတိုက်က နိုင်ငံကျော် စုံထောက်ကြီးတဲ့ အဟီး…….
အောင်မယ် ကင်သပိတ်ရောင် က ပြောသေးတယ်… ငါသုံးပေ ရှည်တာ နင်ဘယ်လိုသိလဲ..
ဘာ ဘာ တူရက အပေအတေ သူတောင်းစားဟုတ်လား။ ဘာ ရွှေတိုက်က ကြံ့ခိုင်သန်မာသော မြင်းမြင်းချင်း အားကိုးချင်စရာ ဟုတ်လား။ တလွဲတွေချည်းပဲအေ။ ရွှေတိုက် အလေလိုက်တဲ့သူကိုများ။ ခြေဖျားမှ မြေကြီးနဲ့မိရဲ့လား။ စွတ်တင်နေလို့ အပေါ်တွေ ရောက်ကုန်တော့မယ်။ အဟီ အာအာဟိ။ ဆက်ရန်ကို အားပေးနေပါတယ်။
ဒါတောင် ကိုဖက်ကပ်နဲ. တားတား တက်ကစီ တစ်ခါပဲ အတူတူ စီးရသေးတယ်… တူသများကို ကြိတ်ကြွေးနေလားမသိဘူးနော်…. အော်ယောင်္ကျားမရှိတဲ့ အပျိုကြီးများ တယ်လဲ အမြင်စောင်းသကိုးကွယ်..
သတင်းတွေ ကြားနေတယ်.. အခန်းဆက် အပိုင်း ၂၀ လောက် ရှိတယ် ဆိုလား..
သဂျီးတော့ နည်းနည်း မျက်ခုံး လှုပ်စရာ ဖြစ်နေပြီ။
ကျနော်က နေရင်းထိုင်ရင်း အမတ်မင်းဘ၀က လျောကျပြီး..
ဘယ်နှယ့် လူဆိုးတွေနဲ့ များ အပေါင်းအသင်းဖြစ်မိသွားပါလိမ့်..
ရှိစုမဲ့စု စာကလေး အောင်တိုက် တဲ့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း စုံထောက်ကြီး ညာယူသွားတယ်။
အဲဒီစာကလေးတော့ အခုလောက်ဆို အသက်ရှိပါ့အုန်းမလား မသိဘူး။ ဘီယာဆိုင်မှာ သွားမြည်းလိုက်ရင်တော့ ခက်မယ်။
မိတူရ နင် ငါ့အရပ်ကို ရှည်မပြစ်ပါနဲ.ဟယ်… သများက အရပ်ပုတာကို ဂုဏ်ယူနေတာ ဟဲ့ကောင်မရဲ.
အရပ်မြင့်မြင့် ခပ်ချောချော ကောင်တွေက ပေါမှပေါ…
တို.က အရပ်ပုပု ခပ်ချောချော ဆိုတာ ရှားမှရှားအေ့………
အစုံမထောက်ချင်ပါဘူးအေ……. ခရာအမှုတ်ခံရမှာပေါ့လို……. အဟိ…..
နင်ဇာတ်ကို သိမ်းနိုင်ရင်သိမ်း သေသေချာချာမသိမ်းနိုင်လို.ကတော့ အသေသတ်ပြစ်မယ်… လူကိုမဟုတ်ဘူး… အသေသတ်မှာ…
လူမှားပြောမိတာ.. မဲတူမ ကင်သပိတ်ရောင်မဟုတ်ဘူး ဖက်ထုပ်မ ကိုပြောတာ.. အပေါ်က စာက
အောင်မာ ကောင်မ မိတိုက်မနော် စည်ပင်သာယာကတော်မ သူ့ဘာသာလူမှားပီး လူကိုများ ကင်သပိတ်တဲ့
ယူနီဗာစတီ ဆူးခက်က ခေါင်းလောင်းတီးပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၀င်လာသေးလား။
အခုမှ ပထမပိုင်းဖတ်ရလို့ အငြိမ့်မင်းသမီး ဆူးခက် အကြောင်း သိရတယ် ။
စကားမစပ် အဲ့မင်းသမီး က ချိုမိုင်မိုင် အက နဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလာတာ ကလားဗျ ။
မယုံ သူနဲ့ တွေ့ ရင် ကပြခိုင်းရင် သူ ကပြတယ် ။ သူ က အကပိုးက ဟိုးငယ်ငယ်ပုစိညှောက်တောက်ကတဲက ပါတာဆိုကလားဘဲ ။ ဟီဟိ
မဆူးက သူအငြိမ့်မင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားလာမေးတယ်ဗျာ…ဟီးဟီး
ဒီခေတ်စတိုင်နဲ့ရေးထားပေမယ့် သူက ဘာလို့ခေတ်မရှိတဲ့ အငြိမ့်မင်းသမီးဖြစ်ရတာလဲပေါ့ဗျာ…
အငြိမ့်မင်းသမီးအနေနဲ့တော့ ဒီအိမ်ကြီးနဲ့ ဒီလိုအစေခံတွေနဲ့မနေနိုင်တာသေချာတယ်…
အငြိမ့်မင်းသမီးတော့ မင်းသမီးပဲ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်အဆင့် နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖော်ကျူးတဲ့နေရာမှာ
နိုင်ငံတကာလှည့်သွားလာပြီး…နိုင်ငံတော်အဆင့်ပွဲတွေမှာပဲ ကပြလို့ နိုင်ငံတော်အဆင့်နာမည်ကြီးရတာ…
ဟုတ်ပါပြီ ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မောရင် အလှူနေကျရင် ရေသန့် တိုက်မယ် သိလား။
ရေသန့် စပွန်ဆာ ရထားလို့ အ၀ တိုက်မယ်။
ရေခဲ နဲ့ အမြည်း ရော စပွန်စာ မရ၀ူးလားဟင်င်င်….
ဟဲ့ဟဲ့.. ဘုရား ဘုရား.. ဒကာကြီး မဟုတ်မဟတ်တွေ မစဉ်းစားကောင်းဘူးနော်။
အလှူများများ ရဖို့သာ စဉ်းစား..
ဟိတ် ၀တ္တုထဲကြော်ငြာဝင်ခြင်း သည်းခံပါ….
အဲဒါ ကြော်ငြာ ၀င်ခြင်း မဟုတ်ပါ။
အသိပေးခြင်းနဲ့ သတိပေးခြင်း သာ ဖြစ်ပါသည်။
ပုံစံက စူမို နဘန်းသမားနဲ့ နင်လားငါလားပဲ (ဖွလိုက်အုံးမယ်)
ချွေးစက်များမှာ သက်သေရှာတဲ့ ချွေတွေဘူးသီးလုံးလောက်ထွက်နေရင်တော့
အဲ့ဒါ ကြောင်ဝတုတ်ဂိုင်းချုပ်ကြီးပဲ ဟီးးးးးးးးးး
ကုန်စိမ်းထမ်းနေတဲ့ ကိုသူရတစ်ယောက် ကောင်းစားတယ်ပေါ့ …. ။
အဟီး .. စုံထောက်ကြီးကလည် … ကိုသူရကို ထိလျှင် အသက်ချင်းလဲပြီး ကာကွယ်မတဲ့ … (ဗလအားကိုးဖြင့် ) မင်းသမီးဆူးခက်ကလည်း ရဲကိုမယုံ ..စုံထောက်ကြီးကိုပဲ ပုံပြီး ယုံပါသတဲ့ .. ဟိဟိ
ဇတ်လမ်းက အသစ်လည်း မတင်ပေးဘူး။ သင်္ကြန်တွင်း ပျင်းနေလို့.. ဟိဟိ..
ဇာတ်လမ်းကတော့ ရွှေဥဒေါင်း လက်သစ်လေးလား ဝေ့